आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अमेरिकी डलरसहित अन्य सबै देशको विनिमयदर, कुन देशको कति ? – Khabar Patrika Np
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अमेरिकी डलरसहित अन्य सबै देशको विनिमयदर, कुन देशको कति ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: १९:१६:३६
काठमाडौं । आइतबारको अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर यस्तो रहेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।
एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ८८ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८८ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ । एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १५ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १७ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६४ रुपैयाँ ३९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६५ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ ।
सिङगापुर डलर खरिदर ८८ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ८८ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ। क्यानेडियन डलर खरिदर ९५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९५ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ।।